Ahoana no fidirana ao amin'ny Académie Fahombiazana ?
(Ampiakaro ny volume amin'ny hauts-parleurs ampiasainao dia alefaso ny vidéo eto ambany)
Tsotra dia tsotra ny fidirana : misoratra anarana amin’ny formulaire etsy ambany fotsiny ianao dia tonga dia mahazo ilay antsoina hoe « espace membre » izay anao irery.
Ao amin’io « espace membre » io ianao no mahazo sy mijery ireo fampianarana. Ao amin’io ihany koa no ahitanao ny vaovao sy izay tokony ho fantatra rehetra amin’izay zava-mitranga eo anivon’ny académie.
Marihana fa isan-kerinandro ianao no mahazo fampianarana vaovao (fa tsy isanandro). Izany no natao dia mba hanananao fotoana handinihana sy hisaintsainana tsara ireo fampiarana azo. Raha diso mibosesika be loatra manko ny fanomezana ny fampianarana dia mety tsy ho voaray tsara izany fa lalovana fotsiny.